Eswatini, nke bụbu Swaziland mechiri ókèala ma kpọchie alaeze ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Eswatini, nke bụbu Swaziland mechiri ókèala ma kpọchie alaeze ahụ
Airlines • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mịnịsta Ala Ambrose Mandvulo Dlamini nke Eswatini, nke bụbu Swaziland na-agwa mba ya okwu na mmejuputa mmachi, gụnyere imechi oke ala mgbe edere ikpe 9 nke COVID-19 na alaeze ahụ. Onwebeghị onye nwụrụ n’ Eswatini ruo ugbu a.
Taa, alaeze nke Eswatini sonyeere ndị ọzọ nke ụwa na ihe karịrị ijeri mmadụ abụọ na nde iri ise na ụwa dum iji hụ mkpọchi ele mmadụ anya na, maka ndị ọzọ, mkpọchi zuru oke - iji lụso onye iro nkịtị, coronavirus ọgụ. Nke a bụ mpaghara na-enweghị akwụkwọ maka Alaeze na ụwa, oge mgbe mkpebi anyị na mkpokọta mkpokọta iji gbochie mgbasa nke nje virus nke nwetaworo aha ọjọọ na-etinye ule.
Mkpọchi a na-ele mmadụ anya n'ihu nke emetụtala n'ofe obodo taa bụ usoro dị mkpa iji nwee mgbasa nke coronavirus dị isi ike. N'ụzọ doro anya, ọ na-ebute ọtụtụ nsogbu na-enwetụbeghị mbụ, na-ewute azụmahịa na akụ na ụba anyị, na-egbochi nnwere onwe nnwere onwe nke ndị mmadụ na ịgbatị na-agbasa ọtụtụ nchegbu na ụjọ n'etiti ọha mmadụ.
Agbanyeghị, anyị nwere ike ịmụta site na ahụmịhe nke mba ndị ọzọ bụ ndị butere oke oke ọrịa a n'ime ọnwa ndị gara aga. Anyị nwekwara ike ịnata ndụmọdụ site n'aka ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa bụ ndị na-ekwusi ike na ịmachi ngagharị nke ndị mmadụ na ịnọ n'ụlọ, na-enye anyị ohere kacha mma nke ịchekwa ndụ na ịkwụsị mgbasa na-enweghị nchịkwa nke nwere ike iru n'akụkụ niile nke Alaeze ahụ ngwa ngwa.
Omume ndị ekwuputara na Mọnde bụ ndị zuru oke ma anyị na-atụ anya ka ndị EmaSwati niile na ndị bi na mba a rube isi ma rube isi na ha na-enweghị otu. Omume na-enweghị isi nke mmadụ ole na ole nwere ike itinye anyị niile na nsogbu. Ọnụ ego anyị bara ụba mana ahụike na nchekwa nke ụmụ amaala kacha mkpa.
Ka ọ dị ugbu a, Eswatini nwere ikpe asatọ ekwenyesiri na coronavirus na ọtụtụ ule ka na-echere. Ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ikpe dị mma bụ ihe kpatara nchegbu na ngosipụta na anyị enweghị nhọrọ ọ bụla karịa ị bea ntị, na-anabata ma na-anabata usoro njikwa na mgbochi niile etinyebere.
Enwere m ike ichetara EmaSwati na usoro ndị a na-etinye n'ọrụ maka ụbọchị iri abụọ na-esote gụnyere ịkwụsịtụ njem niile na-enweghị isi n'ime obodo, obodo, obodo na gafere, belụsọ oge inye ma ọ bụ nweta ọrụ dị mkpa dịka ahụike, nri, ma ọ bụ ọrụ ụlọ akụ. A machibidoro nzukọ niile nke ihe karịrị mmadụ iri abụọ iwu. Nzukọ ndị na-emezu ihe a chọrọ ka a na-ahụ ụkpụrụ ịdị ọcha kwesịrị ekwesị na ịdebe mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke 20-20 mita, n'etiti ndị ọzọ.
Emechiri ala maka njem na-enweghị isi. Naanị ngwongwo na ibu, yana ụmụ amaala na-alọta na ndị bi na iwu, ka enyere ka ha gafee oke. Gọọmentị ga-ahụ na ngwaahịa na ọrụ niile dị mkpa ga na-adị na mba ahụ karịa oge mkpọchi. Citizenslaghachi ụmụ amaala na ndị bi na-eti na ha ga-doro amanyere bụ iwu nke 14 ụbọchị iche na iche ebe ma e wezụga ndị nwere ike onwe-iche. Kpọmkwem, enwere m ike ịdụ ụmụ amaala si South Africa na mba ndị ọzọ nwere nnukwu nsogbu aka ịchebe onwe ha iche ụbọchị 14 na enweghị ewepu. N'oge iche iche nke onwe, ha kwesịrị izere mkpakọrịta nke anụ ahụ na ndị òtù ezinụlọ ma nọrọ naanị ha n'ime ụlọ nke ọma.
Gọọmentị agwala ndị were mmadụ n’ọrụ ka ha kwe ka ọtụtụ ndị ọrụ were rụọ ọrụ site n’ụlọ. N'ime izu ahụ, ọtụtụ ndị ozi nyere ụkpụrụ nke ihe a na-atụ anya n'aka ndị were gị n'ọrụ na ndị ọrụ maka oge nke oge mkpọchi akụkụ a. Ulo oru di nkpa kwesiri iga n'ihu na-aru oru site na iji nkwekorita di nma na usoro ndi mmadu choro iji chebe ndi oru site na oria ojoo. Edelarịrị ndepụta nke ọrụ ndị dị mkpa site n'aka Ministry of Commerce, Industry, and Trade ma gụnyere ahụike, ụlọ akụ, nchekwa, ike, ọrụ mmiri, mgbasa ozi na ndị ọzọ. Ndepụta zuru ezu dị na weebụsaịtị Gọọmentị ma ọ bụ ịnwere ike ịkpọ nọmba ọnụọgụ n'efu 8001002.
Azụmaahịa ndị na-esonyeghị na ndepụta nke ọrụ ndị dị mkpa na-atụ anya ịbelata arụmọrụ ha ma, nke kachasị mkpa, na-agbaso ụkpụrụ ahụike na ịdị ọcha kwesịrị ekwesị, na-emezughị nke ha nwere ike imechi. Anyị na-aga n'ihu na-azụ ahịa iji mee ka mmetụta nke mkpọchi ele mmadụ anya n'ihu na azụmaahịa ha, ọkachasị, iji hụ nrube isi zuru oke na usoro mkpọchi ele mmadụ anya n'ihu.
Gọọmentị na-aga n'ihu itinye aka na ngalaba ndị ọzọ dị mkpa ka anyị na-etinye usoro nzaghachi maka ọrịa a. Nke a gụnyekwara nzuko omeiwu.
Obi dị m ụtọ ịkọ na nzuko omeiwu agafeela iwu Coronavirus nke ga-akwado ịrapara n'ọrụ abụọ nkwupụta Mberede nke Mba na usoro mgbochi mkpọchi. Ndị ọrụ nchekwa adịlarịị na ala na-eme ka iwu dị na iwu ma nwee ikike ịchụsasị nzukọ nke ihe karịrị mmadụ 20 na ịmanye usoro nke ga-eduga na ịgba akwụkwọ nke ndị na-emejọ. Ndị isi, ndị isi ọdịnala na ndị uwe ojii obodo ga-ebute ụzọ iji hụ na a na-emezu iwu na obodo.
Gọọmentị emechaala ịtọlite ​​ụlọ dị mkpa iji mee ka mmezi nke National Response na ntiwapụ nke Covid 19. Theselọ ndị a gụnyere ndị Kọmitii Njikwa Mberede nke Ọchịchị, National Task Force na ndị ọrụ Nka na ụzụ na-amaliteworị itinye aka na gọọmentị. Lọ Ọrụ Nchịkwa Mpaghara arụkwala ìgwè ndị na-ahụ maka ọdachi mpaghara mpaghara na ọkwa nchịkwa kachasị dị ala iji mata banyere coronavirus ma melite njikere na mgbochi ihe otiti ahụ. Ha na ndị ọrụ nchekwa, kọmitii ndị a emeela netwọkụ gafee mba ahụ nke ejikọtara nke ọma.
Ndị nchịkwa mpaghara na-arụ ọrụ na Chiefs na ndị isi ọdịnala iji mee ka ndị mmadụ mara na ọkwa obodo yana ichebe ezinụlọ ka ha bute nje ahụ. Kọmitii na-achịkọta ndị ọrụ amalitela ịnata onyinye maka National Response. A na-etinye ihe ndị a n'ọrụ nke ọma. E nyela ọtụtụ obodo na ụlọ ọrụ gọọmentị dị mkpa ịsa aka.
Nyefe ihe akụrụngwa ahụike yana akụrụngwa na-aga n'ihu yana etinyela iwu ndị ọzọ iji gboo mkpa a.
Gọọmentị site n'aka Ministri Ahụike na-aga n'ihu na-azaghachi ndị ahụ Covid 19 ntiwapụ site na ntinye nke atụmatụ nzaghachi Ahụike.
Enweela nyocha nke ọnọdụ ahụ site na mbanye ndị ọrụ ndị ọzọ na ngalaba ahụike gburugburu ebe obibi bụ ndị ga-aga n'ihu na-achịkwa ọdụ ụgbọ mmiri ntinye gụnyere iso ndị ọrụ nchekwa na-arụkọ ọrụ. Agbakwunyere igwe na-ekpo ọkụ ma ka na-echere ndị ọzọ iji hụ na mkpuchi zuru oke.
Ministri Ahụike na-agbaso nsuso kọntaktị iji nye ozi gbasara ikpe a ga-agbaso ma nyochaa mmepe nke mgbaàmà iji gwa mkpa nnwale. Ọzụzụ nke ndị ọrụ nlekọta ahụike bụ ndị na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Mkpọchi mkpọchi a dị oke mkpa iji mebie nnyefe nke nje a. Mmebi nke nje a ga - aga ogologo ụzọ iji merie ọrịa a zuru ụwa ọnụ.
Ya mere, ọ dị oké mkpa iji mesie ike mkpa ọ dị ịgbaso ihe mgbochi nke mkpọchi ele mmadụ anya n'ihu na-ezo aka na ịmachi ijegharị na naanị njem dị mkpa. A na-agba onye ọ bụla bi n’obodo ahụ na onye bi na ya ume ka ha rubere usoro ndị a iji hụ na mgbasa nke nje a na mba ahụ. Anyi aghaghi ikwuputa otutu puku umu amaala ndi werela mmachi ndia na uzo ha.
Enwere m ike iji ohere a mesie Onye-isi-ike Eze Mswati III ekwuputala echi, Satọde 28 Machị 2020, ụbọchị obubu ọnụ na Sọnde, ụbọchị Ekpere Mba. Anyị na-atụ anya ka EmaSwati gafee okwukwe niile ga-esonye na ibu ọnụ na ikpe ekpere ka anyị na-achọ nduzi nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile iji nyere anyị aka ịkwọ ụgbọ mmiri site na nsogbu a mba na ụwa chere ihu. O bu n’ekpere ka Chukwu chebe anyi na nsogbu niile. Akwụkwọ Ndị Filipaị 4: 6-7 na-ekwu na, "Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ekpere unu niile, rịọnụ Chineke ihe ọ bụla unu chọrọ were obi obi ekele: udo nke Chineke, nke karịrị echiche niile, ga-eche obi unu nche, site n'aka Kraịst Jizọs. ” Ka m kelee ndị eze ha maka idu ndị isi ịbịaru Chineke nso.
Ọrịa a enyela anyị ohere ịme ihe n'otu nzube iji chebe ibe anyị dị ka EmaSwati, mana ọ bụghị ịtụ ụjọ. Oge ahụ abụghị oge ịgbasa ozi ụgha na soshal midia. Anyị enweghị ihe kpatara ịtụ ụjọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ọrụ ma soro ntuziaka niile gọọmentị na World Health Organisation nyere.
Ka anyị na-ahụ mkpọchi ele mmadụ anya ma gbochie mmegharị na-enweghị isi ma nọrọ n'ụlọ, ka anyị cheta ịgbaso usoro ịdọ aka na ntị nke Ministụ Ahụike na World Health Organisation nyere. Ndị a gụnyere:
Ebe obibi anyị kwesịrị ịdị ọcha ma dịkwa mma yana ihe mmetụ niile dị elu ga-amịnye ọgwụ mgbe niile.
Jiri aka mmiri na ncha saa aka gị ma ọ bụ jiri mmanya na-aba n'anya.
Kwụsị ikwe aka ma jiri ụzọ ekele ndị ọzọ na-abụghị mmetụ.
Nọgide na-enwe ọ dịkarịa ala mita 1 site na ibe gị.
Zere imetụ ihu gị aka (ọnụ, imi, anya) ma kpuchie ụkwara na uzere.
Lekọta ndị na-adịghị ike, ọkachasị ụmụ amaala na ndị nwere nsogbu iku ume na-akpata nsogbu nke nwere ike ibute ọrịa coronavirus.
Ọ bụrụ na ị nwee ahụ mgbaàmà yiri ọkụ (ahụ ọkụ, iku ume, ụkwara, elu okpomọkụ) gaa na ụlọ ọrụ ahụ ike gị kacha nso ma ọ bụ kpọọ Ọrụ Ahụike Mberede Ahụike na-akwụghị ụgwọ 977.
MGBE Onye ozi
Ala eze Eswatini bụ onye otu na Ndị njem nlegharị anya nke Africa.